महानगरलाई रेखाको प्रश्न : रत्नपार्कको नाम फेर्न हतार गर्नेले त्यही छेउमा बस्ने गरिबको भोक नदेख्ने? – नेपाली सूर्य
November 27, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on महानगरलाई रेखाको प्रश्न : रत्नपार्कको नाम फेर्न हतार गर्नेले त्यही छेउमा बस्ने गरिबको भोक नदेख्ने?
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालीकाले रत्नपार्कको नाम फेरेर संखधर साख्वा उद्यान नामाकरण गरिसकेको छ। रत्नपार्कको नाम फेर्न हतार गरेको महानगरपालीकाले त्यही नजिक भात खानका लागि विहानदेखि कुर्ने, र त्यही भातकै लागि भनेर एक घण्टाको बाटो हिँडेर आउने गरिब निमुखालाई नदेखेको आरोप लाग्दै आएको छ।
उनको फेसबुकको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै :‘रत्नपार्कको नाम फेर्ने र जोगाउने ध्याउन्नमा लागि रहँदा, छेउको बसपार्कमा भुइमा बसेर खाना पर्खेको गरिव निमुखाको बारेमा बोल्ने कस्ले हो ? ‘कि राजनीति भनेको नामको खेल मात्रै हो ? भनेर उनले प्रश्न समेत उठाएकी छन्
रत्नपार्कको नाम फेर्ने र जोगाउने ध्याउन्नमा लागि रहदा, छेउको बसपार्कमा भुइमा बसेर खाना पर्खेको गरीव निमुखा को बारेमा बोल्ने कस्ले हो ? कि राजनीति भनेको नामको खेल मात्रै हो?
Posted by Rekha Thapa on Wednesday, November 25, 2020
‘केपी ओली पार्टीको अध्यक्षबाट हट्ने शर्तमा एकता गर्नुपर्छ’-झाँक्री
प्रधानमन्त्रीले गरे राजीनामाको संकेत, पार्टीको चुनाव नलड्ने